‘ओली–प्रचण्डमात्रै होइन विपी, गिरिजाप्रसादसम्मले मेरो घरमा भात खाएका छन्’ |
‘ओली–प्रचण्डमात्रै होइन विपी, गिरिजाप्रसादसम्मले मेरो घरमा भात खाएका छन्’
काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आफूले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र सोही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै नभएर काँग्रेस नेता विपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मलाई भात खुलाएको बताएका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लवमा प्रसाईंले तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र तात्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खाना खुवाएर बि एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिलाउन खोजेको मिथ्या आरोप लगाइएको बताए ।
केही समयअघि प्रसाईंले आफ्नो भक्तपुरस्थित घरमा ओली र दाहाललाई खाना खुवाएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । प्रसाईंले वाम एकताको लागि आफूले पनि केही भूमिका खेलेको बताउँदै थपे, ‘मुलुकमा स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको लागि मैले भूमिका खेलेको हुँ । मेरो घरमा विपीले पनि खाना खानुभएको छ । गिरिजाले पनि खानुभएको छ । नरहरी आचार्य, विश्वप्रकाश शर्माले पनि खाना खानुभएको छ । काँग्रेस, साझा विवेकशील पार्टी एक भएर अघि बढ्छन् भने मार्सी चामलमात्रै होइन, वास्मतीको भात खुवाउन तयार छु ।
पूर्वाञ्चलको झापामा रहेको बि एण्ड सी टिचिङ अस्पतालको सम्बन्धन प्रक्रिया यथाशक्य पूरा गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै उनले आफू तीन वर्षदेखि अन्यायमा परेको र काठमाडौं बाहिर सुदुरपूर्वमा अस्पताल खोल्दा पनि माफियाको आरोप खेपिरहेको दुःखेसो पोखे ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र भवन विभागमा पहिलोपटक दर्ता भएर सम्पूर्ण मान्यताहरु पूरा गरेर सुदुरपुर्वमा मैले मेडिकल कलेज खोल्दा गोविन्द केसी र उनका अनुयायीहरुले मलाई माफिया भन्ने गरेका छन्, मैले कसैको पैसा लुटेको होईन, बिहान उठ्दा पत्रिका पढ्न समेत डर लाग्छ, खाली माफिया, माफिया भनेर भनेका छन्, लेखेका छन्, अरु मेडिकल कलेजहरुले गल्ति गरेका छैनन् भन्दिन तर गल्ति नै नगरेको ब्यक्तिलाई माफिया भनेर भन्दा मन दुख्दो रहेछ ।’
प्रसाईंले थपे, ‘२०६८ पुस १४ गते मलाई सरकारले नै बोलाएर एलओआई दिएको थियो । त्यसपछि मैले मेडिकल कलेजको काम गरेको हुँ । त्यही एलओआई देखाएर बैंकबाट ऋण लिएको छु । अहिलेपनि ऋणमा छु। के सुदुरपूर्वमा खोलिएको बि एण्ड सीको सम्बन्धन रोक्दा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन्छ ? पूर्वका २९ लाख जनताको स्वास्थ्योपचार गर्दा मैले अपराध गरें ? हिजोका दिनहरुमा त्यस क्षेत्रका मानिसहरु भारतको सिलगुढी उपचार गर्न जान्थे । कति छोरीचेलीहरु बलात्कार हुन्थे । आज त्यो समस्या दुर भएको छ । बोरामा बोकेर ल्याएका खुट्टाहरु जोडेर बिरामीलाई घर पठाएका छौं । टाउकाका गोलीहरु निकालेका छौं । वर्षमा १२ करोड बराबरको निःशुल्क उपचार गरेका छौं । राज्यलाई करोडौं रुपियाँ कर तिरेका छौं ।’
स्वास्थ्यमा भ्याट छुट गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै प्रसाईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बि एण्ड सी नेपालकै राम्रो अस्पताल हो । हाम्रोभन्दा धेरै लगानी गरेर डा. उपेन्द्र महतोले ललितपुरको भैसेंपाटीमा नेपाल मेडिसिटी खोल्नुभएको छ । हजारौंलाई रोजगार दिनुभएको छ । के अब सबै लागेर त्यो अस्पताल भत्काउने ? जुन अस्पताल दिल्लीको मेदान्तभन्दा राम्रो छ, बिदेशीहरु पढ्न र उपचार गर्न आउने वातावरण हाम्रै मेडिकल हुन, हामीलाई नै राज्यले यसरी किन लखेटिरहेको छ ? मेरो काठमाडौंमा राम्रै घर छ । छोराछोरी डाक्टर पढेका छन् । मलाई सम्पति चाहिएको छैन् । म त जे सक्छु र जति सक्छु देशको लागि गर्छु भनेर लागेको हुँ ।’
प्रसाईंले थपे, ‘म ०५६ सालबाट जनयुद्धमा होमिएको र ६ महिना सैनिक हिरासत भोगेको मानिस हुँ । समाजवादको लागि यो मेडिकल सरकारी बनाउनुपर्छ भने पनि म तयार छु । सरकारले चलाउने हिम्मत राख्छ भने अहिले नै छोड्न तयार छु । गोविन्द केसीले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाईदैन भन्नुभयो, मैले सुदुरपूर्वमा खोलें । आज उहाँ मेरो कलेजलाई र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक्न उद्धत रहुनभएका कारण मैले उहाँको अनशनलाई राम्रो नभनेको हुँ । हो, उहाँका जायज मागहरु पूरा हुनुपर्छ । छानविन गरेर मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । यो मेरा पनि माग हो ।’
दुई पार्टी विघठनपछि नेताहरुको सामूहिक शपथ
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच डेढ घण्टा वार्ता तर कस्न सकेनन् अझै एकताको गाँठो